OpenWebinars: yako chikuva kuti uwane emahara makosi | Linux Vakapindwa muropa
OpenWebinars: yako chikuva kuti uwane emahara makosi
Vhura Webinars Iyo MOOC-mhando online chikuva uko iwe kwaunogona kuwana inonakidza yemahara uye yakabhadharwa makosi. Kune avo vasingazive, izwi rekuti Webinar rinonyanya kuve "musangano wewebhu" kana "musangano wepamhepo", ivo misangano yecyber umo mavanodzidza mune iyi kesi, vachitaurirana nezwi kuburikidza nemakrofoni, webcam, nezvimwe. kumusangano kana mukirasi. Izwi iri rakagadzirwa naEric R. Kolb muna 1998, uyo akanyoresa muna 2000. Mhedzisiro yacho inobva paWebhu + seminar kana webinar.
Zvakanaka, dzokera kuWorldWebinars, ikozvino isu tinoziva dzakasiyana MOOC mapuratifomu uko emahara makosi anowanzo kupihwa zvakanyanya pamusoro pewebhu, asi OpenWebinars yakati siyanei sezvo makosi anounza iyi nyowani "webinar" maitiro. Iwo mahofisi makuru epuratifomu akagadzirwa muSeville uye ane kubatana kweAndalucía OpenFuture_, chirongwa cheTelefonica neJunta de Andalucía kusimudzira budiriro nekudzidza.
Kana iwe ukapinda iyo yepamutemo webhusaiti de Vhura Webinars, iwe unozokwanisa kuwana rumwe ruzivo uye kunyangwe yakazara katarogu yemakosi aripo auchazokwanisa kusaina nawo. Iyo color system inoratidza kana iripo kana kuti ichaitwa kuti iwanikwe kuruzhinji munguva pfupi, sezvo iwe uchiona iro runyorwa rwakawandisa uye iwo makosi ari kunakidza pamisoro yenyaya nezve matekinoroji matsva. Urongwa urwu runokuudzawo kuti ndeapi akasununguka, kunyanya pane imwe paLinux.
Iyo kosi inodzidziswa mahara nemutongi masisitimu ane makore anopfuura mashanu ezviitiko uye ndiani anokudzidzisa iwe mabhesiki ekugadzirisa maLinux masisitimu anotangira kubva padanho re zero. Pasina mubvunzo danho rakanaka iro murume uyu aida kugovana nesu tese uye izvo kubva kuLxA tinodzokorora kuitira kuti iwe uzive uye ugone kuwana icho ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » OpenWebinars: yako chikuva kuti uwane emahara makosi
Maitiro ekuyedza Flatpak pane yedu yekushandisa system